Moe Kai: အားကစား နဲ. ကျန်းမာရေး
နေ့စဉ် အားကစား မလုပ်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တောင် ၁၀မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်လုိုက် ၁၀ မိနစ်လောက် အပေါ်တက်ဆင်း လုပ်တာ၊ တမျက်လှဲတာတွေ လုပ်လိုက်ရင်လဲ WHO ရဲ. တနေ. ၃၀မနစ် ဆိုတဲ့ ရည်ညွှန်းချက်ကို ပြည့်သွားရတာပါပဲ။ဒီလို ခွဲပြီး ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုဟာ ခန္တာကိုယ် အလေးချိန် ကျစေအောင်တောင့် မလုပ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ရရှိစေတဲ့ တခြားကျန်းမာရေးရဲ. အကျိုးအမြတ်တွေတော့ ရစေတယ်လို. ဆိုပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ရင်လဲ ဖြေးဖြေး လျှောက်မဲ့ အစား ကိုယ်အသက်ရှုသံ ပြင်းလာတဲ့ အထိ၊ ကိုယ်နှလုံးခုန်သံ မြန်လာတဲ့ အထိ သွက်သွက်လေး လျှောက်တယ်ဆိုရင် နှလုံး အဆုတ် နဲ. ကျန်းမာရေးကို ပိုကောင်းစေပါတယ်။
ဒီမှာ တခု သတိထားရမယ့် တချက်ကတော့ အားကစား လုပ်လေ့လုပ်ထ မရှိတဲ့ သူဆိုရရင် ချက်ချင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို တအားမလုပ်သင့်ပါ။ တန်ဆေး လွန်ဘေး ဆိုတဲ့ စကားလိုပင်၊ အလွန်အမင်း လုပ်မိပါက ဒါဏ်ရာ အနာတရ ရဖို.သာလျှင် များပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း စ၍ တနေ. နဲနဲ ဆိုသလို ပိုတိုးပြီး လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒီနေ.တော့ Stretching exercises မြန်မာလိုပြောရင်တော့ အညောင်းဆန်.တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများလို. ပြောရမလား။ ဥပမာ တချို.ကို ဖော်ပြ ရင်း ဒီစာလေးကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတော့မယ်။
အနေအထားတမျိုးဆီမှာ အဆစ်နဲ. ကြွက်သားများ တင်းလာတဲ့ အထိ စက္ကန်. ၃၀ လောက်ကြာအောင် ဆွဲဆန်.ပေးပါ။
ပုခုံး အဆစ်နဲ. ကြွက်သားများ အညောင်းဆန်.ပေးခြင်း
ကျောမှ ကြွက်သားများ အတွက်
ပေါင်းရင်း ပေါင်ခြံ အဆစ်နဲ. ကြွက်သားများ အတွက်
Photos are taken from Sportsinjuryclinic.net